Ukunethezeka nokunethezeka kwezinga eliphezulu leCochabambino - I-Airbnb
Ukunethezeka nokunethezeka kwezinga eliphezulu leCochabambino
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Guizeth
U-Guizeth Ungumbungazi ovelele
Izwa injabulo yokuphumula ngombono omuhle kusukela esitezi se-11 ukuya kusithonjana se-Cochabamba (Cristo de la Concordia) ekamelweni lethu kusukela kumbhede osayizi weNkosi (izihlalo ezi-3) futhi uzwe umoya opholile opholile ngamafasitela amakhulu.
Vuselela amandla ku-charm yaleli fulethi elihle endaweni ekhetheke kakhulu yedolobha, okuthe ngaphezu kokusha, yonke imininingwane icatshangwa ukuthi ikulethela ukuthula nokuzwana endaweni yakho yokuhlala.
Ingabe udinga ukuthula nokuthula? Ifulethi lilungele lokhu, phumula embhedeni wenkosi, esikhwameni sikabhontshisi esikhulu noma vele ujabulele umbhede wethu usofa we-Queen size siphumule umzimba wakho ...
Phuma uye kuvulandi, ujabulele ukubuka kwezintaba ... noma uhambe, indawo ikumema ukuthi ujabulele idolobha nezindawo ezinhle kakhulu. Uzothola izindawo zokudlela, izindawo zokucima ukoma, amasinema, izinkantolo zokudla kanye nokuzijabulisa ngokujwayelekile. .
"Isibhakabhaka" sitholakala endaweni ekhethekile kakhulu yedolobha, North sector; ukuhlanganisa ukuzola kanye nesu lendawo yalo kanye nethuba lokuthola noma yiluphi uhlobo lwesidingo sakho endaweni eqhele ngamabhuloki amane kanye nemizuzu eyisithupha nje ukusuka enkabeni yedolobha.
Uma udinga ukuqondiswa ngezindawo, izinombolo zocingo nanoma yisiphi esinye isihloko, ungangabazi ukusithinta futhi sizokusiza ngenjabulo.
Siyasazisa isikhathi sakho nokuba phakade, ngakho-ke sikulungele ukubambisana futhi sibe nokuhlala okungcono kakhulu e-Cochabamba.
Siyasazisa isikhathi sakho nokuba ph…
UGuizeth Ungumbungazi ovelele